Sacuudiga oo qaadacay Baaritaanka UN-ka ee dilkii Suxufi Khashoggi – Video • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sacuudiga oo qaadacay Baaritaanka UN-ka ee dilkii Suxufi Khashoggi – Video
Sacuudiga oo qaadacay Baaritaanka UN-ka ee dilkii Suxufi Khashoggi – Video
February 11, 2019 - By: Khalid Yusuf
Wasiirul Dowlaha Arrimaha Dibada ee Sacuudiga Adel al-Jubeir ayaa sheegay in Sacuudiga uusan ogolaan doonin baaritaanka uu wado guddiga ka socda Xafiiska Xaquuqul Insaanka Qaramada Midoobay oo maalmihii lasoo dhaafay baaritaano ka waday dalka Turkiga.
Guddigan oo lagu wado inay warbixintooda Golaha Amaanka horgeeyaan bisha June ee sanadkan, ayaa xaqiijiyey in dilkii suxufi Jamal Khashoggi ee 2dii bishii Oktober ka dhacay qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay Istanbul ay ahayd fal fool xun oo ay geysteen saraakiisha Sacuudiga, guddiga ayaa sheegay in Boqortooyada Sacuudiga ay sidoo kale caqabado badan hordhigtay baaritaankii ay wadeen booliiska Turkiga.
Sirdoonka dalka Maraykanka ayaa sidoo kale xaqiijiyey in amarka lagu dilay Khashoggi uu ka yimid Qasriga looga taliyo Boqortooyada Sacuudiga, waxaana la rumeysan yahay in uu amarkaasi bixiyey Dhaxalsugaha dalkaasi ee Maxamed Bin Salman.
Adel al-Jubeir oo isagu horey usoo noqday Wasiirka Arrimaha Dibada xiligii uu dilkaasi dhacay ayaa ku dooday in dowlada Sacuudiga aysan waxna ka ogeyn dilkaasi oo ay geysteen koox askar ah oo ku xad-gudbay awoodooda siduu sheegay Maxamed Bin Salmaan amarkaasi ma bixin.
Dhinaca kale Adel al-Jubeir oo la hadlayey barnaamijka telefishinka Maraykanka ee (Face the Nation) Axadii shalay ayaa ku dooday in aan loo baahneyn baaritaanka Qaramada Midoobay.
“…Maxkamadaha Sacuudiga ayaa hawshan ku filan, waanu xirnay kuwii dilka geystay, waana qirnay khaladaadkii dhacay, hadana maxkamad baanu soo saareynaa kuwa dilka geystay…” ayuu yiri Adel al-Jubeir Wasiirul Dowlaha Arrimaha Dibada ee Sacuudiga.